Ciise: Waa khuraafaad quraafaad ah
Xilliga 'Advent iyo Kirismasku' waa xilli loo fiirsado. Waqti loo fasiro Ciise iyo jidhkiisa, oo ah waqti farxad, rajo iyo ballan qaad. Dadka adduunka oo dhami waxay ku dhawaaqaan dhalashadiisa. Hal koronto Kirismaska ​​ka dib kan kale ayaa laga maqlayaa ether-ka. Kaniisadaha dhexdeeda, dabbaaldegga waxaa lagu dabaaldegaa riwaayadaha jiidda, cantatas iyo heeso wadani ah. Waa waqtigii sanadka qofku ku fikiri lahaa in adduunka oo dhami ay bartaan runta ku saabsan Ciise Masiix. Laakiin nasiibdarro, qaar badani ma fahmaan macnaha buuxa ee xilliyada Kirismaska ​​waxayna u dabaaldegaan iidda kaliya sababtoo ah niyadda fasaxa ee la xiriirta. Tani way ka baxsadaa iyaga sababtoo ah midkoodna ma yaqaan Ciise ama waxay ku dhegan yihiin beenta ah inuu yahay quraafaad - sheegasho la qabtay ilaa bilowgii masiixiyadda.
Waa wax caadi ah waqtigaan sanadka in tabarucaada joornaaliistayaasha lagu muujiyo: "Ciise waa khuraafaad", iyo sida caadiga ah soojeedinta waxaa loo sameeyay in Kitaabka Quduuska ah uusan aamin aheyn sida marqaati taariikhi ah. Laakiin sheegashadan ma tixgaliso inay iyadu dib u eegi karto waqti dheer oo aan ka fogayn ilo badan oo "lagu kalsoonaan karo". Taariikhyahanadu badiyaa waxay soo xigtaan qoraaladii Herodotus inay yihiin marag aamin ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kaliya sideed nuqul oo caan ah oo ka hadlaya hadaladiisa, kuwa ugu dambeeyay oo taariikhdooda dib loogu dhigay 900 - qiyaastii 1.300 sano kadib waqtigiisii.
Waxay ka barbar dhigayaan tan 'Axdamaanta' Axdiga Cusub oo loo qoray wax yar ka dib dhimashadii Ciise iyo sarakiciddiisa. Rikoorkiisii ​​hore (qayb yar oo ka mid ah Injiilka Yooxanaa) waxay taariikhdu ahayd illaa inta u dhexeysa 125 iyo 130. Waxa jira in kabadan 5.800 oo ah koobi dhammaystiran ama iskudhaf ah oo Axdiga Cusub oo Griig ah, ilaa 10.000 ku ah Laatiin, iyo 9.300 oo ku qoran luqado kale. Waxaan jecelahay inaan soo bandhigo seddex xigasho oo caan ah oo xoojinaya xaqiiqada muuqaalka nolosha Ciise.
Midda ugu horeysa waxay dib ugu laabataa taariikhyahan Yuhuudi ah Flavius ​​Josephus qarnigii 1aad:
Wakhtigan Ciise wuu noolaa, nin caqli badan [...]. Xaqiiqdii, wuxuu ahaa shaqaalihii ficillada cajiibka ah iyo macallinka dhammaan dadka si farxad leh u aqbalay runta. Markaa wuxuu soo jiitay Yuhuud badan iyo dad badan oo jaahiliin ah. Wuxuu ahaa Masiixa. In kasta oo Bilaatos, uu sababay dareenka dadka ugu sharafta badan, wuxuu ku xukumay dil iskutallaabta, xertiisii ​​hore ma ay aaminin isaga. [...] ilaa maantadan dadka Masiixiyiinta ah ee isu yeera isaga ka dib way sii jirayaan. Antiquitates Judaicae, qarniyadii hore ee Yuhuudda, Heinrich Clementz (Gudbin.)].
FF Bruce, oo tarjumay qoraaladii asalka ahaa ee Latinka ayaa lagu tarjumay Ingiriis, wuxuu yidhi "Taariikhda Masiixu waa mid aan loo meel dayin oo ah taariikhyahan dhexdhexaad ah sida Julius Caesars."
[...] Nero wuxuu dhalleeceeyay kuwa kale wuxuuna ciqaabay kuwa ay dadku ku neceb yihiin ficilladooda xishoodka ah wuxuuna ugu yeedhay Masiixiyiin. Magacyadeeda, Masiixa, waxaa diley xukunkii Tiberius ee uu xukumay taliye Pontius Pilatus. [...] Sidaa darteed, kuwa qirtay markii hore waa la qabtay, ka dib, markay codsadeen, dad aad u tiro badan oo loo qaddariyo inay yar yihiin xukun, oo aan ahayn wax badan sababtoo ah gubashada lagu eedeeyay, laakiin sababtoo ah nacaybkooda guud ee dadka. (Annales, 15, 44; tarjumaadda Jarmalka ka dib GF Strodtbeck, oo uu tafatiray E. Gottwein)
Wuxuu Rooma ka eryay Yuhuuddii kicisay xasillooni darro joogto ah Chrestus. (Taariikh nololeedka Sueton, Tiberius Claudius Drusus Caesar, Abriil 25.4; waxaa tarjumay Adolf Stahr; aragtida higaada "Chrestus" ee Masiixa.)
Hadalka Suetonius wuxuu tilmaamayaa fiditaanka Masiixiyadda ee Rooma ka hor 54, labaatan sano kadib dhimashadii Ciise. Markii la baarayay dukumiintiyadaan iyo kuwa kale ee taageeraya, Axdiga Cusub ee Ingiriiska I. Howard Marshall wuxuu ku soo gabagabeeyey: “Suuragal ma ahan in la macneeyo soo bixitaanka Kaniisadda masiixiga ama Qorniinka Injiil iyo dhaqan soo jireenka ah oo qulqulaya iyada oo aan la aqoonsaneyn isla waqtigaas aasaasihii masiixiyadda dhab ahaantii. ku noolaa. "
In kasta oo saynisyahano kale ay su’aal ka keenayaan xaqiiqada labada xigasho ee ugu horeeya oo qaarkood xitaa ay u tixgelinayaan in lagu been abuurtay gacmo Masiixiyiin, tixraacyadan ayaa salka ku haya sal adag. Waan ku faraxsanahay inaan maqlo faallo ka yimid taariikhyahan Michael Grant buuggiisa Ciise: Dib u eegis Taariikheed ee Taariikhda ayaa lagu yiri: "Haddii aan ku dabaqno isla shuruudihii Axdiga Cusub sida qoraalladii kale ee qadiimiga ahaa ee wata waxyaabo taariikhi ah - waxaan sameyn karnaa - waan awoodnaa Ha diidi jiritaanka Ciise wax ka badan wixii dad jaahiliin ah oo jiritaankooda dhabta ah ee tirada dadka taariikhda casriga ah weligood la weydiin. ”
In kasta oo kuwa shakiga qabaa ay dhaqso u diidaan waxa aysan rabin inay rumaystaan, waxaa jira waxyaabo ka reeban. Fiqiga fiqi John Shelby Spong, oo loo yaqaan shaki iyo deeqsi, wuxuu ku qoray ciise ciise (Eng. Ciise ciise): “Marka hore, Ciise wuxuu ahaa qof run ahaantii degenaa meel cayiman waqti cayiman. Qofka aadane Ciise ma ahayn khuraafaad, laakiin waa qof taariikhi ah oo ka soo baxay tamar aad u weyn - tamar wali u baahan sharraxaad ku filan maanta. ”
Dad badan oo shaki geliya waxay ku doodayaan in Albert Einstein uusan u rumeysan ciise inuu yahay diin laawe. In kasta oo uusan rumeynin "ilaah gaar ah", hadana wuxuu ka taxadiray inuusan ku dhawaaqin dagaal kuwa sidaas sameeya; sababta oo ah: “Aaminaada noocan oo kale ah waxay had iyo goor iila muuqataa inaan ka fiicanahay maqnaanshaha aragti kasta oo aan ka badnayn.” Max Jammer, Einstein iyo Diinta: Fiisigiska iyo fiqiga; Jarmalka: Einstein iyo diinta: fiisikiska iyo fiqiga) Einstein, oo ku soo barbaaray nin Yuhuudi ah, ayaa qirtay inuu "xamaasad u leeyahay tirada iftiinka ee reer Naasared". Markii la weyddiiyey wehelka wada-hadalka ah inuu gartay jiritaanka taariikhiga ah ee Ciise, wuxuu ku jawaabay: “Su’aal la'aan. Qofna ma aqrin karo injiillada iyadoon la dareemin jiritaanka dhabta ah ee Ciise. Shakhsiyanimadiisu waxay ku taagantahay eray kasta. Khuraafad maleh nolosha noocaas ah kama buuxsamo. Tusaale ahaan, sidey uga duwan tahay aragtida aan ka helno sheeko halyeey qadiimiga ah sida Theus. Kuwaan iyo geesiyaasha kale ee qaabkan ah ayaa ka maqan darnaanta dhabta ah ee Ciise. " (George Sylvester Viereck, Fiidkii Sabtida, Oktoobar 26, 1929, Maxey Noloshu Macnaheedu Tahay Einstein: Wareysiga; Eng. Einstein Nolosha macnaheedu waa Wareysi)
Waan u socon kara sidan oo kale, laakiin sida saynisyahan Roman Katooliga ah ee Raymond Brown uu si sax ah u xusay, isaga oo diiradda saaraya inuu Ciise yahay khuraafaad sababay inay dad badani iska indhatiraan macnaha dhabta ah ee injiilka. Dhalashada Masiixa Brown wuxuu xusay in had iyo jeer looga hadlo agagaarka Kirismas kuwa raba inay qoraan maqaal ku saabsan taariikhdiisa dhalashada Ciise. Guul yar, waxaan isku dayaa in aan ka dhaadhiciyo in ay gacan ka geysan karaan fahamka sheekooyinka ku saabsan dhalashadii Ciise iyaga oo diiradda saaraya farriintooda halkii aan ka soo qaadan lahaa su'aal ka fog wacdiyaasha. Haddii aan diiradda saarno faafinta sheekada Ciidda Masiixiga, dhalashadii Ciise Masiix, intii aan isku dayi lahayn inaan dadka ka dhaadhicinno inuusan Ciise ahayn khuraafaad, waxaan daliil u nahay xaqiiqda Ciise. Caddayntaas nool ayaa ah nolosha uu hadda innaga hoggaaminayo iyo bulshadayada. Ujeedada Kitaabka Qudduuska ahi maahan in la caddeeyo sax ahaanta taariikhiga ahayd ee ku-ekaanta Ciise, laakiin in lala wadaago kuwa kale sababta uu u yimid iyo waxa imaatinkiisu innaga inoo yahay. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu adeegsanayaa Kitaabka Quduuska ah inuu si run ah noola soo xiriiro jidhka ku dhashay iyo sarakicidda Rabbi ee ina jiheeya xaggiisa si aan u rumeysanno oo aan u sharfi karno Aabbaha isaga. Ciise wuxuu dunida u yimid caddeyn ah jacaylka Ilaah u qabo mid kasta oo inaga mid ah (1 Yooxanaa 4,10). Hoos waxaa ku yaal sababa kale oo badan oo imaatinkiisa:
- In la baaro oo la badbaadiyo wixii lumay (Luukos 19,10).
- Si loo badbaadiyo dambiilayaasha oo loogu yeero basaska (1 Timoteyos 1,15; Mark 2,17).
- Inuu naftiisa u bixiyo badbaadinta dadka (Matayos 20,28).
- Si aad ugu markhaati furaan runta (Yooxanaa 18,37).
- Si loo fuliyo doonista aabbaha iyo in lagu hoggaamiyo carruur badan oo sharaf leh (Yooxanaa 5,30:2,10; Cibraaniyada).
- Si aad u noqoto nuurka dunida, jidka, runta iyo nolosha (Yooxanaa 8,12: 14,6).
- In lagu wacdiyo injiilka boqortooyada Ilaah (Luukos 4,43).
- Inuu u hoggaansamo sharciga (Matayos 5,17).
- Maxaa yeelay aabihii baa u diray: “Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, in kuwa isaga rumaystaa oo dhammu ayan lumin, laakiinse waxay leeyihiin nolosha weligeed ah. Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. Ku alla kii isaga rumaystaa ma xukumi doono. laakiin kii aan rumaystaa waa la xukumay, maxaa yeelay, isagu ma rumaystaa magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay. (Yooxanaa 3,16-18).
Bishan waxaan u dabaaldegeynaa runta ah in Ilaah u soo galay adduunkeena xagga Ciise. Way fiicantahay in aan is xasuusino in qof walba uusan ogayn xaqiiqadan, waxaana naloogu yeeray inaan sidaas yeelno (weydiiyay) inaad tan la wadaagto kuwa kale. Ciise wuu ka badan yahay qof taariikhda ku jira - waa Wiilka Ilaah oo u yimid inuu qof kasta la heshiisiyo Aabaha Ruuxa Quduuska ah. Taasi waxay ka dhigeysaa waqtigan farxad, rajo iyo ballanqaad